Theater ny Night |	Theater ny Night |
Raha tia herin'ny maizina sy ny Fantasy amin'ny sehatra maro loko, mampaninona nitsoka sary sy mozika mahafinaritra, Theater ny alina ny lalao tsy maintsy diniho milalao amin'ny slots toerana. Ity lalao ity dia manana dimy reels, ary folo raikitra paylines izay handresena ao manolotra isan-karazany ny tsikombakomba avy amin'ny marika. The slot ho ambony ny resahana ny tsara tarehy alina ao amin'ny ala amin'ny hazo, fireflies sy tery renirano ny rano mikoriana eo afovoan'ny rehetra. Ny fototra mozika dia malemy ala mikitroka gadona izay toa tena mampitony ny sofinao sy ny saina. Ny hilokana Manomboka miaraka amin'ny habetsahan'ny £ 0.25 isan-kofehy ireny, ary miakatra ny Max ny £ 250 isan-kofehy ireny.
Zavatra tsy mahafinaritra slots toerana lalao dia novokarin'ny (NYX) Next Gen, ny taranaka ankehitriny lalao mandroso Casino orinasa amin'ny traikefa toy ny avo tahaka ny roapolo taona ao amin'ny orinasa. Manana fandresena loka maro slot anaram-boninahitra ny zava-bitany lisitra.
tsara tarehy ity slots toerana lalao dia manana marika tsara tarehy toy ny vorona amin'ny elany mamirapiratra glittery, manoloana ny lolo, ary ny voninkazo mavokely mamirapiratra. Ny vorona mandoa anao indrindra amin'ny 400 in-dimy ny tsatòka eo landings amin'ny payline, arahin'ny 50 fotoana miaraka amin'ny efatra sy 15 in-telo marika. Cards fanehoana an'ohatra-po, spade, Club sy ny diamondra rehetra tamin'ny endrika maro loko vatosoa sarobidy no kely karama ny sary famantarana ny lalao. Misy noravahiny volamena rafitra izay no hany tombony mariky misy amin'ny lalao ity.
Wild Bonus Feature: Ny volamena nasiany toetsika miaraka amin'ny fehezanteny ny fivoaky ny volamena tao amin'ny taratasy dia ny bibidia marika Ary Solon'i ny lalao rehetra fanehoana an'ohatra. Io endri-javatra miseho rehetra, afa-tsy ny reels amin'ny reels iray sy dimy fa mitohy ny rehetra ihany ny reels maimaim-poana mandritra ny spins.
Firefly Free Spins: Izany no endri-javatra ity slots toerana lalao izay mampandeha vokany eo amin'ny endriky ny bibidia eo amin'ny reels Afovoany telo nandritra ny lalao fototra. Hahazo enina spins miaraka amin'ny stacked tampon-tanety ao amin'ny miraingiraingy azon'ny telo mandra-pahatapitry ny enina spins. Random sariohatra nandritra maimaim-poana ihany koa ny hahazo spins ovana hahazo an'ala izay mampitombo ny vintana ireo Fandresena lehibe.
Amin'ny entana sy ny tsy ampoizina mba handresena ao tombontsoa goavana, dia afaka mora foana manantena ny ho vola be ity slots toerana lalao. Ny lalao manatitra RTP ny 96.13%.
Live Casino Games | Get £ 5 Free Bonus